ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေ – Cele Posts
အိပ်မက်ဆုံရာပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက် အဖြစ် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အောင်ထက်ကို စတင်သိရှိ ခဲ့ရပြီး နောက်မှာတော့ ခုဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်သီချင်းခွေတွေနဲ့ စုံတွဲသီချင်းတွေကို သီဆိုလာတာကြောင့် လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားပြီးအောင်မြင် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…ပရိသတ် အချစ်တော် အောင်ထက်ဟာ ဖခင်ရဲ့ခေါ်ယူမှုကြောင့် ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးကို ကျောင်းတက်ဖို့ရောက်ရှိ လာခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ မပြေလည်ဖြစ်လာတဲ့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ကျောင်းထွက်ပြီး လှိုင်သာမြို့နယ်က စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီက အဆက်အသွယ်ကနေတစ်ဆင့် အောင်မြင်လာတဲ့သူ့ဘ၀ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ အနုပညာရှင်တော်တော် များများလည်း ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီလိုရပ်တည်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေ ထဲမှာ အဆိုတော်အောင်ထက်တစ်ယောက်လည်း ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်အောင်ထက်ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရလို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေပေမယ့်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ထက်ကတော့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံ ထားရတာ(၉)ရက်ရှိနေပြီး ဒီနေ့မှအနံ့စရတယ်လို့ပြောာထားပါတယ်။
ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာ မိခင်နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ မသိသေးဘူးလို့ပြောပြထားပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာမို့အားငယ်နေမှာတော့ သေချာပါတယ်နော်. အမှန်တရားကို ရရှိဖို့အတွက် ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင် နေရင်းနဲ့အမြန်နေကောင်းလာဖို့ ပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်း အားပေးစကားပြောပေးထားကြတာပါသေးတယ်နော်… အောင်ထက်ကိုချစ်ကြတဲ့ Cele World ပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားလေးတစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..
ကိုဗဈကူးစကျခံထားရပွီး လှတျမွောကျနယျမွကေို ရောကျရှိနတေဲ့ အဆိုတျော အောငျထကျရဲ့လကျရှိကနျြးမာရေး အခွအေနေ
အိပျမကျဆုံရာပွိုငျပှဲဝငျ တဈယောကျ အဖွဈ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ အောငျထကျကို စတငျသိရှိ ခဲ့ရပွီး နောကျမှာတော့ ခုဆိုရငျ ကိုယျပိုငျသီခငျြးခှတှေနေဲ့ စုံတှဲသီခငျြးတှကေို သီဆိုလာတာကွောငျ့ လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားပွီးအောငျမွငျ လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…ပရိသတျ အခဈြတျော အောငျထကျဟာ ဖခငျရဲ့ချေါယူမှုကွောငျ့ ရနျကုနျဆိုတဲ့ မွို့ကွီးကို ကြောငျးတကျဖို့ရောကျရှိ လာခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတေော့ မပွလေညျဖွဈလာတဲ့ မိသားစုစားဝတျနရေေးအတှကျ ကြောငျးထှကျပွီး လှိုငျသာမွို့နယျက စကျရုံတဈခုမှာ အလုပျလုပျခဲ့ပွီးအဲဒီက အဆကျအသှယျကနတေဈဆငျ့ အောငျမွငျလာတဲ့သူ့ဘဝရဲ့အကွောငျးကိုလညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားခဲ့ပါသေးတယျ။
ခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ အာဏာသိမျးမှုဖွဈနတေဲ့ အခွအေနမှော အနုပညာရှငျတျောတျော မြားမြားလညျး ပွညျသူနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ. အဲဒီလိုရပျတညျခဲ့တဲ့အနုပညာရှငျတှေ ထဲမှာ အဆိုတျောအောငျထကျတဈယောကျလညျး ပါဝငျတာဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောအောငျထကျကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုကွီးပွညျသူတှနေဲ့တသားတညျးပါဝငျခဲ့ပွီး ဖမျးဝရမျးထုတျခံထားရလို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ တာလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာလှတျမွောကျနယျမွမှောရောကျရှိနပေမေယျ့ကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာလညျးဖွဈပါတယျ။အောငျထကျကတော့ ကိုဗဈကူးစကျခံ ထားရတာ(၉)ရကျရှိနပွေီး ဒီနမှေ့အနံ့စရတယျလို့ပွောာထားပါတယျ။
ဒါအပွငျကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာ မိခငျနဲ့အပေါငျးအသငျးတှေ မသိသေးဘူးလို့ပွောပွထားပါတယျ။ ကိုဗဈကူးစကျခံထားရတာမို့အားငယျနမှောတော့ သခြောပါတယျနျော. အမှနျတရားကို ရရှိဖို့အတှကျ ပွညျသူတှအေတှကျတိုကျပှဲဝငျ နရေငျးနဲ့အမွနျနကေောငျးလာဖို့ ပရိသတျနဲ့မိတျဆှတှေကေလညျး အားပေးစကားပွောပေးထားကွတာပါသေးတယျနျော… အောငျထကျကိုခဈြကွတဲ့ Cele World ပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားလေးတဈခုခုလောကျရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
သူအရမ်းခင်တွယ်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကို ထုတ်ရောင်းရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဝိုင်းချစ်